XOG:- Dowladda oo go’aan cad kasoo saartay arrinta maamul u sameynta gobolada Hiiraan iyo Sh/dhexe – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
XOG:- Dowladda oo go’aan cad kasoo saartay arrinta maamul u sameynta gobolada Hiiraan iyo Sh/dhexe
Ilo xog-ogaal aynu ka heleyno xarunta madaxtooyadda Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in dowladda federaalka Soomaaliya ay go’aan ku gaartay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo dhiso maamulka gobolada Hiiraan iyo Sh/dhexe, iyadoo dib loo bilaabayo shirkii magaalada Jowhar.
Madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada dalka ee shirka uga socdo magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya ayaa ka dooday arrinta maamul sameynta labada gobol, waxaana shirkaasi uu madaxweyne Xasan Sheekh ka sheegay inay ka go’an tahay dhismaha maamulka Hiiraan iyo Sh/dhexe inta aanu dhammaan xilligiisa.
Dhinaca kale, wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya C/raxmaan Odowaa ayaa sheegay in dib loo bilaabi doono shirkii magaalada Jowhar, isla markaana la dhisi doono maamulka labada gobol ee Hiiraan iyo Sh/dhexe, kaas oo noqon doono kan ug dambeeya ee ka harsan maamulada dalka ee federaaleynta ah.
Ilaa iyo haatan lama oga sida maamulkaasi u dhismi doono, iyadoo dhisida maamulkaasi ay kasoo horjeedaan xubno uu hormuud u yahay Ugaas Xasan Ugaas Khaliiif oo ah ugaaska Beesha Xawaadle, laakiin wararka ayaa sheegaya inuu jiro qorshe lagu dedejinayo shirka Jowhar oo looga maarmay odayaasha diidan dhismaha maamulkaasi.
Si kastaba ha ahaatee, arrintaan ayaa kusoo beegmaysa xilli muddo laba bilood ah lagu daray xilliga rasmiga oo ay dhici doonto doorashada dalka, iyadoona ilaa iyo haatan laga war-sugaayo wixii natiijo ah ee arrinkaasi kasoo baxa.